လေ့ကျင့်ရေး & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အားလုံးအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် & လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ
Open Source နည်းပညာယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးအသုံးများနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့် Redhat လုံခြုံ server ကိုအခြေပြု enviroments မှာလွှမ်းမိုးနေသည်။ Redhat တစ်ဦးချင်းတိုးတက်မှုအတွက်သင်တန်း, သင်တန်းနှင့်အောင်လက်မှတ်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ Red Hat System ကိုဖုံးလွှမ်းအဆိုပါတာဝန်များကို။
Microsoft ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်စေပေးပို့သို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုပေါင်းစည်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့၎င်းတို့အားမှာလေ့ကျင့်ရေး၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး Microsoft ကအသိအမှတ်ပြု professional.To အခန်းကဏ္ဍကိုအေဒီ RMS အပြဇာတ်နားလည်သည် Microsoft နည်းပညာကိုအသုံးပြု & ဖြစ်လာရန်သင်ပိုမိုထိရောက်စေပါသည်။
အဆိုပါ ITIL (သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အအုံစာကြည့်တိုက်), မူဘောင်အိုင်တီ၏ရွေးချယ်မှု, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှသည့်ဝန်ဆောင်မှုများစံဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပညာရေးအတွက်တစ်ဦးကခေါင်းဆောင် ယင်း offers accredited online cyber security degrees for advancing IT security careers.EC-Council မှ isaglobal leader in InfoSec Cyber Security certification programs like CEH. India’s Leading Professional EC-Council.
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် is used to describe both the people who work foracompany or organization & the department responsible for managing related to employees.It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives.
DevOps နည်းလမ်းများ, စစ်ဆင်ရေးနားလည် & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပေမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆက်စပ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦးက "ခေတ်မီ" စနစ်များ Programmer ၏အသင်းအဖွဲ့သယ်ဆောင်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်နေကြသည် DevOps ။
, လုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုလေ့လာသည့် NIST မူဘောင်နှင့်အတူအိုင်တီလုံခြုံရေးအစီအစဉ်များနှင့်မူဝါဒကိုထောကျပံ့, ဒါမှမဟုတ် P ကိုဝင်ငွေrotect ကွန်ယက်, ကွန်ပျူတာ, Programs ကို, CISSP, CompTIA လုံခြုံရေး + CASP, CEH အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်ပိုပြီး!
Cisco Networking & လမ်းကြောင်းကရိယာအတွက်ကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Cisco CCNA နဲ့တူက၎င်း၏လက်မှတ်နှင့်အတူပြည့်စုံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုပူဇော်, CCNP & CCIE ထည့်နည်းပညာ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရောစပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ထုတ်ကုန်နေရာနှင့်ရောင်းဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်အရာစျေးကွက်တစ်ခု SUBCATEGORY ဖြစ်ပါတယ်။ It အင်တာနက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းလိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်။
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု စတင်, စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၏စည်းကမ်းကိုထိန်းချုပ်ထား, ကွပ်မျက်နှင့်တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှာတိကျတဲ့အောင်မြင်မှုသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လုပျငနျးပိတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ် နည်းစနစ်တွေ့ရှိချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ program တစ်ခုသို့မဟုတ် application ကိုကွပ်မျက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည် ဆော့ဖျဝဲ bug တွေ (အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်အခြားချို့ယွင်းချက်) နှင့်အတည်ပြုယင်းကြောင့် ဆော့ဖျဝဲ ထုတ်ကုန်အသုံးပြုရန်လျောက်ပတ်သည်။
Oracle က is one of the largest vendors in the enterprise IT market and the name of its flagship product,arelational database management system that’s formally called Oracle က ဒေတာဘေ့စ။
ဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု မည်သည့်ကျြမှောကျခတျေ Operating System (OS ကို) ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ OS ကိုမှသယံဇာတများကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ရမယ် လုပ်ငန်းစဉ်များ, ကို enable လုပ်ငန်းစဉ်များ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖလှယ်ဖို့, တစ်ဦးချင်းစီ၏အရင်းအမြစ်များကိုကာကွယ်ပေး ဖြစ်စဉ် တခြားကနေ လုပ်ငန်းစဉ်များ.
F5 GTM, Primavera P6, ဒေတာများပေါင်းစည်းရေး: သင်နဲ့တူလိုအပျသကိုပိုပြီးအိုင်တီသင်တန်းများကိုရှာပါ။ နယူးကျွမ်းကျင်မှု Learn အွန်လိုင်းအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်း developer များကူညီပေးဖို့ကို virtual သင်တန်း, အိုင်တီပညာရှင်များသည်။